ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 37.1 လွမ်းမိခုတိုင်
ဒီရက်ပိုင်း မမရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကို သွားဖတ်ကြည့်နေမိတယ်..။ အသက်အရွယ်သိပ်မကွာလှတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတတွေ စုစုရုံးရုံးသိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ငယ်ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာချည်း တူတာမို့ သူရေးထားတာလေးဖတ်ပြီး ကြည်နူးမိရပါတယ်..။ ( မမရဲ့ ဘလော့ဂ်လင့်က ဒီမှာ )
အဲဒါလေးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကျွန်တော့်ညီအကိုမောင်နှမများအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး လွမ်းချင်းချဖို့ စိတ်ကူးရလာရာကနေ အခုလို ကဗျာတပုဒ် ကပျာကယာထုတ်ပြီး ရေးလိုက်ရပါကြောင်း..။
ဒီအဖေ၊ ဒီအမေ ကမွေးဖွား
ဒီမိုး ဒီလေ ဒီစံနစ်တွေက ပြုစား
သူ့မျိုးဆက် ကိုယ့်မျိုးဆက်လေးတွေ တိုးပွား
Posted by navana at 2:59 PM
Chit Hnin said...
အစ်ကို့ ကဗျာလေး ကောင်းလိုက်တာ ... အစ်ကိုတို့ကျောင်းတက်တုန်းက အချိန်ကို ပြန်သတိရတယ် ....။
Brilliant posting!!! Congratulations!!!!
ကိုယ့်မောင်နှမက ကိုယ့်မောင်နှမပါပဲ။ ဘယ်ဘ၀ရောက်ရောက်ပေါ့။
တစ်စိမ်းတွေကိုတောင် လိုရင် ကူညီရ အမုန်းခံပြောရတာတွေရှိတာပဲ။